पोखरामा मंसिर २८ गतेबाट काहुँ महोत्सव हुने, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
पोखरामा मंसिर २८ गतेबाट काहुँ महोत्सव हुने
पोखरा । पोखरामा सराङकोट जति चर्चित छ, त्यत्ति नै ओझेलमा छ। काहुँडाँडा दुवै ठाउँबाट पोखराको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भन्दै काहुँबासी यतिखेर काहुँ महोत्सव तयारीमा जुटेका छन्।
जनकल्याण क्लव र फूलबारी क्लवको आयोजनामा २८ मंसिरदेखि पोखराको पूर्व-उत्तर काहुँडाँडामा महोत्सव हुन लागेको विहीवार महोत्सवस्थलमा पत्रकार सम्मेलनमा गरी जानकारी दिइएको हो।
‘पर्यटक पोखरा घुम्न आउँछन् । लेकसाईडका होटलमा बस्छन् । ब्यवसायीले विहान गाडी चढाएर सराङकोट पु-याउँछन्। २–४ घण्टा डुलाईवरी खाना खुवाएर फर्काइदिन्छन्। पोखराको पर्यटन भनेको लेकसाईड र सराङकोटमा सीमित छ।
कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा–११ का वडाध्यक्ष मोहनप्रसाद बास्तोलाले दुःखेसो पोखे । वडा ११ मै पर्ने काहुँ डाँडा पुग्न अहिले पक्की मोटरबाटो छ। यद्यपि, जतिमात्रामा सराङकोट र लेकसाइड पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा परिचित छन्, त्यत्ति नै ओझेलमा परेको छ काहुँ।
‘निहुरिएर हेर्दा ताल नदेखिए पनि सराङकोटभन्दा कम छैन काहूँकोट । तर पर्यटन ब्यवसायीले काहूँडाँडामा पर्यटक लैजानै चाहदैनन् वडाध्यक्ष बास्तोला भन्छन्–कसैलाई लालीगुराँस हेर्न मन लाग्यो भने काँडे पु-याउँछन् तर १५ मिनेटको बाटोमा लालीगुराँस फुल्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन ।’ सरकार र पर्यटन ब्यवसायीले उपेक्षा गरेकै कारण काहूँडाँडा पर्यटकीय क्षेत्र बन्न नसकेको उनको गुनासो छ।
स्थानीय दीपकप्रकाश आचार्यले काहूँकोटले लेकसाईडको सिण्डिकेट तोड्ने बताए। ‘होटल बनाउछौं, होमस्टे बनाउने तयारी भैरहेको छ।
दृष्यावलोकनका लागि यो भन्दा उत्तम ठाउँ छँदै छैन । हामी कोही भन्दा कमजोर छैनौं, आचार्यले भने काहूँकोटलाई परिचित पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा स्थापित गरेरै छाड्छौं । अव लेकसाईड र सराङकोटको सिण्डिकेट काहुँडाँडाले तोड्छ ।’ पर्यटन विकासका लागि कोटमा रहेको धरहराको स्तरोन्नती गर्न लागिएको छ । ८ करोड ४० लाख रुपैयाँको डिपिआर बनाएर प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयमा पेश गरिएको वडाध्यक्षले जानकारी दिए।
२०६२ र २०६५ पछि तेश्रो संस्करणको महोत्सवको तयारी भएको प्रचार संयोजक दामोदर आचार्यले बताए । महोत्वमा स्थानीय उत्पादनको विक्री र सांगीतिक जमघट हुने उनी बताउँछन्। महोत्सवमा विभिन्न प्रयोजनका ८० वटा स्टल रहनेछन् भने अधिकांश स्टल बुकिङ भैसकेको प्रचार संयोजक आचार्यले बताए।
महोत्सव प्रवेशका लागि ७० रुपैयाँको टिकट ब्यवस्था गरिएको छ भने सोही टिकटबाट धरहरा चढ्ने ब्यवस्था मिलाईएको आचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार महोत्सवबाट ६० लाख आम्दानी हुने अनुमान छ । आम्दानीमध्ये ४३ लाख खर्च हुनेछ भने बचत रकम पूर्वाधार निर्माण र कोट ब्यवस्थापनमा लगानी हुनेछ। १० दिनसम्म चल्ने मेला अवधिभर ८० हजार दर्शकले अवलोकन गर्ने अनुमान आयोजकको छ । मेलालाई एनएमवि बैंकले प्रायोजन गरेको छ।
महोत्सवमा आउने पाहुनालाई खान र बस्ने ब्यवस्था होम स्टेमा हुनेछ। पोखरा रानीपौवाबाट ८ किलोमिटर दुरिमा रहेको काहुँडाँडामा महोत्सव अवधिभर जुनसुकै बेला पनि मोटर आउजाउको ब्यवस्था मिलाईएको महोत्सवका संयोजक देवबहादुर गुरुङले बताए।